Mental Healthy – Page4– Healthy Life Journal
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– သတင်းစာထဲမှာ စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းကို ဖတ်ရရင် စာရေးသူရဲ ့မိတ်ဆွေကိုတာက စာရေးသူနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းလေ့ရှိပါတယ်။ “လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က တရုတ်ပြည်မှာ ကုသမှုအသစ် စမ်းသပ်တီထွင်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား ဖတ်လိုက်ရသလား” “ဘာသတင်းလဲဗျ”...
သက်ကြီးအမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်တတ်သည့် လိင်စိတ်ဝင်စားမှု အားနည်းခြင်း
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ အရွယ်ရောက်ချိန်မှ အသက်ကြီးတဲ့အထိ လိင်စိတ်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ လူတွေက ထင်မြင်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ဝင်စားမှုဟာ အမျိုးသမီးတွေကော အမျိုးသားတွေမှာပါ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက သူတို့ရဲ ့လိင်စိတ်ကို သတိထားမိတတ်ပြီး...
“သင့်မှာ စိတ်ရောဂါရှိ၊ မရှိ” . . .
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– နောက်ဆုံးနှစ် ဆေးကျောင်းသားတွေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာ ဘာလဲဒေါက်တာ” “ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ (WHO) က ဖွင့်ဆိုထားတဲ့ အနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။ စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတာ စိတ်ရောဂါကင်းရှင်းနေတဲ့...
———၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊——— အသက် ၅၀ အရွယ် စိတ်ကျရောဂါလူနာအင်ဒရူးက စာရေးသူကို မေးမြန်းတာမှတ်မိနေတယ်။ “အခုတလော ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတိုင်းသုက်လွှတ်မြန်နေတာသတိထားမိတယ် ဒေါက်တာ” “ဖြစ်ပြီးလို့ ဘယ်လောက်ကြာရင် သုက်လွှတ်တတ်တာလဲ” “အတိအကျတော့မသိဘူး။ ၂မိနစ် ၃မိနစ်လောက်ပဲ ကြာမယ်ထင်တယ်။...
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နည်းလမ်းများ
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျန်းမာရေးဆိုတာ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းနဲ့ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ အခြေအနေလို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက ဆိုထားပါတယ်။ (၁) အာဟာရ အာဟာရမပြည့်စုံခြင်း၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစားအသောက်တွေ စားသောက်ခြင်း၊ အာဟာရဓာတ်ချို ့တဲ့ခြင်း စတဲ့ အာဟာရမလုံလောက်မှုဖြစ်တာက...
———၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု သမားတော်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊——— Q. ဂိမ်းတွေ တရားလွန်ဆော့တာကို စိတ်ရောဂါလို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂိမ်းတွေကို တရားလွန်ဆော့တာက စိတ်ရောဂါလား ဆရာ။ A. စိတ်ရောဂါအကြောင်း မပြောခင်မှာ စွဲလမ်းတဲ့အကြောင်း အရင်ပြောချင်ပါတယ်။...
———၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊——— အရင်အပတ်က ဆေးကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်က ကိုယ်ဝန်တုရောဂါ (Pseudocyesis) ဆိုတာ ရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်တုရောဂါက စိတ်ခံစားမှုမတည်ငြိမ် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို ့ယွင်းရောဂါရှိသူတွေထဲမှာ ဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့တယ်။...
———၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊——— ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေအားလုံးရဲ့၉ ရာခိုုင်နှုန်းက အသက် ၆၀ နဲ့အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ ဖြစ်တယ်၊ ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်များပြားလာလိမ့်မယ်လို့...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– နိဒါန်း စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း (Fantasy) ဆိုတာဘာလဲ။ အတွေးဖြင့်ကြည်နူးခြင်း၊ နေ့လယ်အိပ်မက်မက်နေခြင်းလို့လည်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။ မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်ရရှိနေသလို စဉ်းစားခန်းဝင်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပေမယ့် အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့...